Soo dejisan Link2SD 4.0.12 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Link2SD
Link2SD – software ah si ay u maareeyaan faylasha iyo codsiyada lagu wareejiyo si ay kaarka SD ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto macluumaadka ku saabsan codsiyada, iyaga wareejiyo, tirtirto kayd iyo macluumaad, badalo codsiyada caadiga galay kuwa nidaamka, iwm Link2SD kuu ogolaanayaa inaad dhigay ilaa qalabka si toos ah loo soo dajiyo codsiyada ay u card SD ah. software waa awood si ay u gudbiyaan faylasha apk iyo dalvik-kayd on Risaalo oo dheeraad ah kaadhka xusuusta. Link2SD sidoo kale soo bandhigay meesha bannaan ee lagu kaydin jiray oo qalab ah, kaarka SD oo maqaal qoruhu ay, qadarka xogta kayd iyo nidaamka.
Baarta oo kayd ah
Wareejinta faylasha apk iyo davlik-kayd
Settings si toos ah u dejisan files in kaarka SD ah
Soo dejisan Link2SD
Faallo ku saabsan Link2SD
Link2SD Xirfadaha la xiriira